Heloka mamoafady: Frantsay niray tamin-janany, nidoboka etsy Antanimora
Vous êtes ici: Accueil → Faits-Divers → 2016 → janvier → 7 → Heloka mamoafady: Frantsay niray tamin-janany, nidoboka etsy Antanimora
webmaster 7 janvier 2016 5 Commentaires
Azo an-tsary ny tenany nanao heloka mamoafady tamin’ny zazavavy 15 taona. Raha ny fantatra dia zaza natsangany izy io efa ho dimy taona lasa izay. Taorian’izay dia nanambady ramatoa efa niteraka roa indray izy. Dia mbola nanaovany toetra mamoafady ihany koa ny zanak’io ramatoa io vavy izay mbola latsaky ny 15 taona koa. Mody mitsabo ireo zaza sy mitsapa tosidrà ilay teratany frantsay kanefa efa zavatra hafa no nataony. Indray alina aza dia saron’ny iray tamin’ireo zaza teo am-panaovana izay nataony ity vahiny ity. Saingy norahonany ireo zaza ny tsy hiteny izany. Ny niafarany dia vaky vava nilaza ny zava-nitranga tamin-dreniny (teratany malagasy) ihany ny zaza. Nanomboka teo amin’izay ny disadisa; izay niafara tamin’ny fitoriana. Nampanantsoina ihany koa ny renin’ilay zaza iray natsangana ary mbola sahin’ity vahiny ihany ny nandrahona azy fa hotoriany any amin’ny ambasady hono raha manelingelina ny fiainany avy amin’ny fametrahana fitoriana. Rehefa tonga teny anivon’ny pôlisy ka nandeha ara-dalàna ny fanadihadiana, dia niaiky ny zavatra nataony ihany ilay vazaha. Fanaovana heloka mamoafady sy fanaovan’ny ray sy zanaka heloka mamoafady no niampangana azy. Nitarika ny fidirany am-ponja teny Antanimora izany rehefa tonga teny amin’ny fampanoavana. Fantatra fa 73 taona ity lehilahy teratany frantsay ity. Tsy vitsy ny vahiny no tonga eto amintsika mba hanao fanararaotana ara-nofo fotsiny, indrindra ireo efa zokinjokiny izay matetika efa retirety avy any aminy any. Mahantra loatra koa ny firenena, hany ka maro ireo zaza no mora fitahina amin’ny vola sy ny fampanantenana poakaty ny hoe ho any an-dafy. Tsy vitsy koa anefa ny ray aman-dreny izay lasa mivaro-jaza amin’ny endrika samihafa. Izany rehetra izany dia lasa mahatonga ny Nosy ho paradisan’ny filàna ara-nofo na “paradis sexuel”. Antony izay mahatonga ny mpizaha tany sasany eto amintsika. Marina fa mety mampidi-bola izany ara-ekonomika, kanefa kosa mamotika tanteraka ny firenena sy ny zanaka amam-para ny endrika mamoafady, indrindra fa amin’ny zaza tsy ampy taona…
randria 11 janvier 2016 at 16 h 52 min · Edit
Zareo reo manko ef ts mahazo vevavy ay @tany misy an’zareo any d aty Madagasikara no hanalandreo ny hidihidy ndreo. D ireo soi-disant tompon’andraikitra(Mpitsara malagasy @ ankapobeny sy ny mpitandron’filaminana) mo ef mati-mbola ka manampi-maso manoloana ny famiravirana ny ankizy malagasy izay ataon’ireo vahiny tonga eto. Nefa ra olo tsotra gasy no teo @toeran’vahiny d tonga d nalefa tany Antanimora tsy mis andrasoandraso. Ita @zany fa fitsarana mitongila-ila ny fitsarana malagasy ary natao hoan’ mahantra ihany ny fitsarana sy ny lalana eto Madagasikara fa ts hoan’olona mana-mbola sy vahiny (mody manao hoe mpizahan-tany, mpandraharaha,sns…)
Menalahy 11 janvier 2016 at 13 h 17 min · Edit
Pourquoi les autorités compétentes n’agissent pas contre le tourisme sexuel qui n’est pas un phénomène nouveau à Madagasikara ?
Pourquoi n’y a-t-il pas d’action d’information envers les parents qui ferment les yeux ou se rendent complices de ce tourisme sexuel ?
gasyandafy 7 janvier 2016 at 22 h 09 min · Edit
Atovy barbecue otran tany nosy be !!!
Marika 7 janvier 2016 at 20 h 29 min · Edit
Ny Frantsay tsy manome VISA ny tanora gasy,tokony tsy omena VISA Mcar koa ny antitra vazaha.
randria 7 janvier 2016 at 14 h 18 min · Edit
Ef btsaka mintsy zareo vahiny ireo manao zavatra mamoa-fady otran’zany fa d avotsotra madiodio fona ref vahiny na def hoe nanao heloka zao aza. Izany dia nohon’kolikoly misy eo @fitsarana sy ireo mpitandron’filaminana sarintsariny. Ef impiry moa zareo vahiny ireo no mirehareha milaza hoe fa « Efa voavidiko ny mpitsara malagasy, na hoe manana olona ambony miaro aho…. » Fitsaram-bahoaka iany no mety @zavatra otran’zany ref tsy hanao ny tena asany ny tompon’andraikitra.